Zvikoro Zvovhurwa Vabereki Vachiti Havana Mari VOASites by Language
Nyaya yaVaMugabe Yekuti AU Ibude muUN Yokonzera Mutauro
Harare Residents Trust Yoronga Kusangana naMeya weHarare Pamusoro peKudzuriswa Chibage kweVagari
Vanhu Vanomwe Vanobatwa neTyphoid muHarare
Vatsigiri veNhabvu Vofarira Zvikwete Zvinotambira Mhiri kweMakungwa Kudarika Zvikwata Zvavo
Vaimbove Vashandi veNRZ Voumba Sangano Rinovamiririra
Mapato Anopikisa Odyira Marasha VaMnangagwa
VaCharamba Vonyomba Vamwe muZanu PF Vari Kurwira Chigaro chaVaMugabe
Vakawanda Vopesana Pane Zvakakwanisa Kuitwa naVaMugabe Vari Sachigaro weAU
VaBiti Vokurudzira Mushandira Pamwe Kuitira Kubvisa Hurumende yeZanu PF
VaMugabe naVaTeodoro Obiang Nguema Mbasogo Voramba Vakabatana
Dzimba Dzopiswa Zvine Chekuita neMatongerwo eNyika?
Zimbabwe Warriors Yoisirwa Mabhonasi Pose Painokunda kuRwanda
Mutsigiri weZimbabwe Warriors Osvika kuRwanda neMugwagwa
Pasi Rose Rorangarira VaMartin Luther King
Ndege yeFastJet Yoparura Rwendo rweHarare-Johannesburg Muna Kukadzi
Vanhu Votadza Kutenga Zvinhu Zvine Mitengo Yakadzikira Muzvitoro
Zimbabwe Yopererwa neRopa Rakakosha
Vakawanda Vopesana Maonero Pane Zviri Kuitika Kuna VaMugabe
Makano Oramba Akabatiranwa muZanu PF
Zimbabwe Yotanga Zvakare Kuopareta Zvirwere Zvemoyo
Zororo raVaMugabe Mhiri kweMakungwa Rokonzera Mutauro
Zvikoro Zvinovhurwa Vana Vasina Kubhdadharirwa Mari Vachidzingwa
Nyanzvi Dzotaura Pamusoro peMabhonasi VaMugabe Vari paMutambara Kede
Chitatu, Kukadzi 10, 2016 Local time: 17:08
Studio 7 for Zimbabwe
Studio7 for ZimbabweIndaba zesiNdebele
Nhau / Africa
Zvikoro Zvovhurwa Vabereki Vachiti Havana Mari Print
WASHINGTON— Zvikoro zviri kutarisirwa kuvhurwa neChipiri svondo inouya, vabereki vazhinji vachichema chema nekushaiwa mari dzekutengera vana vavo zvinodiwa, pamwe nekubhadhara mari dzechikoro.
Vabereki vakawanda vanoti vakapedzisira kutambira mari pakati pemwedzi waZvita, vachibva vapinda muzororo rekisimusi, uye kutenga mbeu nezvimwe zvinodiwa pakurima, izvo zvakazoita kuti vasare vasina mari yechikoro.
Zvikoro zvizhinji zvepuraimari zvemumaguta zvinonzi zviri kubhadharisa mari iri pakati pemadhora makumi matanhatu nemadhora makumi mapfumbamwe temu ino, madhora gumi ari emari yechikoro yakatarwa nehurumende, imwe iyi ichinzi ndeyekushandiswa mukusimidzira chikoro nemabasa acho.
Chimwe chikoro chesekondari chekumaruwa chinonzi chakamirira kupuwa mvumo nehofisi yedunhu racho kuti chibhadharise madhora makumi matatu nemashanu. Kwotiwo zvimwe zvikoro zveboarding zvinonzi zviri kubhadharisawo mari inoita mazana matatu emadhora temu ino.
Izvi zvinonzi nevabereki vazhinji zviri kuvaisa parumananzombe sezvo zvikoro zvizhinji zvisingatambiri vana vasina kubhadhara mari dzechikoro.
Chimwe chikoro chepamusoro chinodzidzisa varairidzi chinonzi chiri kuda mazana mana nemakumi mashanu emadhora, mari inonzi nevabereki vakawanda haibatiki panguva dukuduku.
Mumwe mubereki uye vakambotungamira komiti yechikoro chinopinda mumwe mwana wavo, VaFungai Garikai Mahlengwe vekuHatcliffe muHarare vati rimwe dambudziko nderemitengo yeunifomu yechikoro iyo vati yakakwira muzvitoro zvakawanda.
Munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, VaRaymond Majongwe, vaudza Studio7 kuti dambudziko rinosangana nevarairidzi nderekuti zvikoro zvizhinji hazvina zvekushandisa zvakakwana, uye kushaya varairidzi.
VaMajongwe vanotiwo zvimwe zvikoro zvine vana vakawandisa zvekuti vave kuita sematemba mukamuri imwechete, uye zvinoomesera murairidzi pakuti aite basa rake nemazvo.
Hurukuro naVaRaymond Majongwe pamwe naVaFungai Mahlengwe
Hurukuro naVaRaymond Majongwe pamwe naVaFungai Mahlengwei
Nyakuda kuBhomba Kambani yaVaMugabe Okandwa Mujeri kweMakore Mapfumbamwe
Mumwe wemhuri yaVaKuchata, Amai Joyline vati vatambira mutongo wapihwa nedare.
Zimbabweans living outside the country who cannot receive our broadcast signals can now listen to and participate in LiveTalk in real time (8:30-9:00 p.m. Zimbabwe time) (1830-1900 UTC) (Monday-Friday) and call our studio directly at 1-202-619-2077 to participate.
Vamwe Voshora Hurongwa hweHurumende hweKurwisa Huori Nekuona kutekeshera kwedambudziko rehuwori munyika, hurumende svondo rapera yakaparura chirongwa chinokurudzira vana vezimbabwe kuti vabatane mukurwisana nehuwori chainoti “Against Corruption Together”.
Nyaya yeVarairidzi Vasingagone Rurimi rweNdebele Vachidzidzisa Vana kuMatabeleland Yotsviriridza Zvekare
Svondo rapera dare reparamende rakazeya nyaya yekuti vadzidzisi vasingataure Ndebele vangaendeswa here kana kuti kwete kunodzidzisa munzvimbo dzinonyanyotaurwa Ndebele.
Chikwata Chinotsigira VaMnangagwa Chodududza paHondo yeMusangano wePolitburo
Bazi remadzimai raronga mabhazi gumi nemana kuti atakure vanhu kuenda kuHarare neChitatu.
Hurukuro NaDr Moses Rumano
Nyaya Ina Irwin Chifera
Hurukuro naVaObert Gutu pamwe naVaGadzira Chirumhanzu
Zimbabweans living outside the country who cannot receive our broadcast signals can now listen to and participate in LiveTalk in real time. Click on the link below to listen to the LiveTalk program in progress (8:30-9:00 p.m. Zimbabwe time (1830-1900 UTC) Monday-Friday) and call our studio directly at 1-202-619-2077 to participate.
Local Time: 8:30-9:00 p.m.
UTC Time: 1830-1900
Duration: Weekdays: 30 minutes
Nyaya Ina Taurai Shava
Hurukuro naVaVictor Matemadanda
Nyaya Ina Arthur Chigoriwa
Ndebele 1800-1830 Monday-Friday ListenPlaylist
Studio 7 has been providing Zimbabwe with objective, reliable and balanced radio news broadcasts since 2003 and has become a highly valued alternative point of reference on the airwaves for many thousands of Zimbabweans.
Studio 7 covers politics, civil society, the economy, health, sports, music, the arts and other aspects of life in Zimbabwe.
Nhau dzeShona Nguva yeChirongwa Muvhuro-Chishanu
Nguva dzeChinomwe Manheru 19:00
UTC Time: 1700
Nguva yeChirongwa 30
Most ViewedNyaya yaVaMugabe Yekuti AU Ibude muUN Yokonzera MutauroMabhanga Maviri muZimbabwe Anobviswa paZvirango Zvakatemerwa neAmericaHurumende Inotara Nzara seDambudziko Rakakurisisa MunyikaYangove Njake Njake muZanu-PF Umo Maberekera PongweMuchuchisi Johannes Tomana Vochuchiswa